Ikwusi ike: Kọwaa ma rụkọta ọrụ ntinye vidiyo gị | Martech Zone
jaa na-enye gị ohere ịkpọ ndị ọrụ òkù, rụkọta ọrụ ma kọwaa vidiyo gị. Nwere ike iji vidiyo dị ma ọ bụ ọrụ nnabata gị dị ka Vimeo, Dropbox, Igbe, Youtube. Onye ọ bụla na-arụ ọrụ site na njikọ nke onwe, nke pụrụ iche, na-enyere gị aka ịkekọrịta ma nye nzaghachi ozugbo site na otu gị ma ọ bụ onye ahịa gị na-enweghị mkpa akaụntụ.
A na-anakọta nzaghachi na vidiyo ejiri timestamped na vidiyo na-elele. Can nwere ike mbupụ ndetu ozugbo gị video edezi software na anya na-ahụ onye kwuru ihe n'ime usoro iheomume. Ịnye ọnụahịa na-amalite na $ 10 kwa ọnwa maka akaụntụ nkeonwe ma gbasaa ruo $ 60 maka azịza zuru oke nke ụlọ ọrụ.
Tags: nkọwaAVIFLVM2TM4VVidio AhịaMkMOVMP4MPEGMPGMTSMXFvideo mmekotammepụta vidiyoWMV